काठमाडौंमा फेरी लकडाउन ! – All top Here
Home/समाचार/काठमाडौंमा फेरी लकडाउन !
गृह मन्त्रालयले बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै रातिको समयमा हुने काठमाडौं प्रवेशमा रोक लगाइएको जनाएको छ । हाल उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकामा पीसीआर परीक्षण थालिएको छ । बिहीबार उपत्यका प्रवेश गरेकामध्ये २४ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो ।
मन्त्रीहरुको भारत भ्रमणमा रोक
साइप्रसमा सेनाका कप्तानले गरे नेपाली युवातिकी हत्या
रविलामीछाने लाइ हिरासत मा भेटेका आइजीपी खनाल को आयो दुखद खबर।